Public Health in Myanmar: Haemorrhoids (Pile)
ပထမအဆင့် ရှိနေပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။ အမျှင်ပါတဲ့ အစားအစာတွေဆိုတာ အသီးအရွက်တွေကို ဆိုလိုတာပါလား။ ဘာတွေ စားရမလဲ။ ဝမ်းနှုတ်ဆေးရော သောက်ဖို့ လိုပါမလား
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာ အမျှင်အများဆုံးပါပါတယ်။ ပို့စ်ထဲမှာ ကျွန်မညွှန်းထားတာ ရှိပါတယ်။ "ကျွန်မတင်ခဲ့သည့် ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင်ရန်အတွက် နေ့စဉ် စားသုံးရန် လိုအပ်သော အစာပမာဏ ပို့စ်ကို Nutrition label အောက်မှာ Healthy Diet ခေါင်းစဉ်နှင့် http://health.ngoinmyanmar.org/2008/11/healthy-diet.html မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ " ဆိုတာ ညွှန်းထားပါတယ်။ ပို့စ်ကို ပြန်သွားပြီးတော့ အဲဒီ site ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီထဲမှာ အစာအာဟာရ တမျိုးစီရဲ့ ဗမာဏဘယ်လောက် စားသင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပြုထားတာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ Nutrition နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခြားကျွန်မ တင်တဲ့ ပို့စ်တွေမှာလည်း အစားအစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်မှာ ဘာဓါတ်ချို့တဲ့ရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာရှိပြီး ဘယ်အစားအစာမှာ ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖေါ်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ ကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပို့စ်ထဲက ကာကွယ်ခြင်းမှာ အကြံပြုထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်အလေးချန်များနေရင် လျှော့ဖို့၊ ထိုင်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူဆိုရင် အနည်းဆုံး နှစ်နာရီတကြိမ်ထ ပေးဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ၀မ်းနှုတ်ဆေး စားခြင်းဖြင့် စားထားတဲ့ အာဟာရထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်လို့ ကျွန်မ အကြံမပြုလိုပါဘူး။ ထမင်းစားရင် အမျှင်ဓါတ် လုံလောက်အောင် ပါဝင်စေပြီး ရေကိုလုံလောက်အောင် သောက်ဖို့ကိုပဲ ကျွန်မ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာထဲက မိသားစုဝင်တွေ တော်တော်များများ မရှိတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်နေတုန်း ကျန်ခဲ့တဲ့ ညီနဲ့ အဖေပါ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဆုံးရှုံးသွားတော့ အခု ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ပါတယ်။ သူတို့ဆုံးပြီဆိုတာ သိလိုက်တော့ ကျွန်တော် ဘာစာမှ ကျက်လို့မရတော့ဘူး။ အတန်းထဲမှာ ထိုင်နေလဲ ဘာတွေသင်သွားလဲဆိုတာ တစ်လုံးမှ မသိလိုက်ဘူး။ တင်စရာ စာတမ်းတွေလဲ အချိန်မီ မတင်နိုင်နဲ့ စာမေးပွဲတွေပါ ကျကုန်တယ်။ စာပြန်ကျက်လို့ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မဆိုင်တာ မေးတယ်တော့ မထင်ပါနဲ့။ ဖြေပေးနိုင်မယ် ထင်လို့ပါ။
ဇော် ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်တော့ အချိန်နဲ့ပဲ ကုစားရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် ငါးပါးသီလကို လုံအောင်ထိန်းပြီး တရားမှတ်တာထက် ထိရောက်တာ ဘာမှရှိမယ်မထင်ဘူး။ အိပ်မပျော်တဲ့အချိန် အားနေတဲ့အချိန်တွေမှာ မတွေးနေပဲ တရားမှတ်နေရင် သိပ်ပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ တခြားဘာသာဆိုရင်တော့ တယောက်တည်း နေမယ့်အစား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘုရားရှိခိုးသွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဖေါ်တွေနဲ့ အချိန်ပေးကုန်သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းက Course coordinator နဲ့ အတန်းပိုင် Tutor ကို သေသေချာချာ Appointment လုပ်ပြီးလူကိုယ်တိုင် တွေ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အီးမေးလ်ပို့ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြေအနေကို ရှင်းပြပြီး ဘယ်လိုဆက်လုပ်လို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ မေးသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့ ကျောင်းသား အစည်းအရုံတို့ ဆိုတာ ကျောင်းတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ သွားပြီးလည်း ရှင်းပြပြီး အကူအညီတောင်းသင့်တယ်။ သူတို့ ကူညီနိုင်တာ ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ကောလိပ်နဲ့ တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာ Free counseling service ဆိုတာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခု ဇော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို နှစ်သိမ့်အားပေးတဲ့အပြင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဆက်လုပ်စရာ နည်းလမ်းတွေကို ညွန်ပြပေးတယ်။ Semester တခု မကုန်မချင်း မတင်ရသေးတဲ့ Assignment တွေအတွက် Special consideration အနေနှင့် Extension ရဖို့ကိစ္စ၊ စာမေးပွဲကို ရက်ရွှေ့ပြီး ဖြေဖို့ကိစ္စ၊ ဒီ Semester အတွင်းမှာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း Study Plan ကို ချိန်းဖို့ကိစ္စတွေကအစအကုန်လုံး လုပ်ပေးပါတယ်။ ဇော် တက်တဲ့အကျောင်းမှာ Counseling Service မရှိရင်တောင်မှ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကတော့ ရှိမှာ သေချာတယ်။ ကိုယ့်ကိုသင်တဲ့ အတန်းပိုင် Tutor နဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာ ဖြစ်အောင် သွားပြီး Study Plan အတွက်ကို အကြံညာဏ် တောင်းသင့်ပါတယ်။ ဇော်က Non English Speaking Background Student တဦးဖြစ်တာရယ် လက်ရှိ စိတ်သောကရောက်စရာနဲ ကြုံတွေနေရသူ ဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို တောင်းဆိုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကြိုးစားကြည့်ပါလို့ပဲ ကျွန်မ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေချမ်းမြေ့ပါစေ။
ဇော်ရဲ့ မေးခွန်းကို မငယ်နိုင် ဖြေထားတဲ့အပေါ် နည်းနည်း ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ Mental Health ခေါင်းစဉ်အောက်က Depressive Disorder ကို သွားပြီး ဆွေးနွေးချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အလားတူ ဆုံးရှုံးမှု ကြုံခဲ့သူ တစ်ဦး မေးထားတာကို ကျွန်မ ပြန်ဖြေထားတာ ရှိပါတယ်။ http://health.ngoinmyanmar.org/2008/08/blog-post_26.html
ကျောင်းက ဆရာဝန်ကိုလည်း သွားတွေ့ပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ bereavement ကို major life event ဆိုပြီး အလေးဂရုပြုပြီး ဖေးမကုသကြပါတယ်။ မြန်မြန်သက်သာနိုင်တာပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေ။
Sayama Nuthwe-thank you very much for healping me to answer for Zaw. I don't know what you've written exactly because I can't read Zawgyi Burmse font from here but I know that you would giveauseful answer for him. My answer is notaprofessional therapeutic answer because that is only what I do when I face to some serious porblems and stressful situation during my study.
Your respose was absolutely relevant to the question, Nge Naing, so thanks. I am glad that someone added non-pharmacological practical approaches that apply directly toastudent. Getting extensions for course work and assignments should not beabig problem foraperson in acute or even non-acute but un-resolved bereavement. I hope Zaw has gone away with some practical plans.
ဖတ် ၊ မှတ် ၊ကျင့်လို့ တစ်ခြားဆိုဒ်များမှာပြန်လည်ကူးယူ ဝေမျှခွင့်ပြုပါရှင့်။
မူရင်းဆိုဒ်ကို credit ပေးပါ့မယ်။
ရပါတယ် မြတ်ပုလဲဖြူ အစ်မပို့စ်ကိုမှ မဟုတ်ဘူး ဒီဘလော့ဂ်က စာရေးသူအများစု ရေးတဲ့ ဘလောဂ်ဖြစ်ပြီး ဘလော့ဂ်လိပ်စာနဲ့ စာရေးသူရဲ့ နာမည်လေးကို ညွန်းပေးပြီး ဘယ်ပို့စ်ကိုမဆို ပြန်လည်ကူးယူ ဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။ ထပ်ဆင့်ပြန်ဖေါ်ပြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Mone Mone said...
လိပ်ခေါင်းနာကျင်မှုကြောင့်၊ မိန်းမကိုယ်အ၀နားနာ ကျင်နေပါတယ်။ သားအိမ်ကို စစ်ဆေးထားတဲ့ အဖြေကလည်း CIN1 လို့ ပြနေတော့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါသလား။ ဆီးသွားရင် လည်း မိန်းမကိုယ်အ၀က Pain အနည်းငယ်ရပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းကနာကျင်ပြီး၊ Vagina အ၀မှာနာတတ် ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တတ်သာလား။ အဖြူဆင်းလို့ Pap Smear လုပ်တော့ CIN1 လို့အဖြေထွက်လို့ OG က Biopsy လုပ်ရင်လုပ် ဒါမှမဟုတ်ရင် Pap Smear ကို ၆လ တစ်ခါစစ်လို့ပြောတယ်။ လိပ်ခေါင်းကြောင့်ဘဲVagina နာတာလား သိချင်တယ်။
Mone Mone အောက်မှာ ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ ရေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်ရင် ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်၏ အမျိုးသမီး (၃၉ နှစ်) သည် ပြီးခဲ့သော September လဆန်းပိုင်းက၊ မြန်မာပြည်တွင် Ultrasound, Biopsy, CT scan, Pep smear Test ပြုလုပ်ခဲ့ရာ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ (CIN 1, HPV Infection) ဟု အဖြေထွက်ခဲ့ပါသည်။ ဘန်ကောက်မြို့N-Health ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ ပြီး Thin Prep Test စစ်ဆေးရာတွင်လည်း Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy. Mild inflammation. Reactive epithelial cellular changes. Partially obscuring blood. ဟု အဖြေထွက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ပြသလျှက်ရှိသော OG မှ မြန်မာအခေါ် မီးရှို့လျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်း ပြောပါသည်။ အဖြေကို ပိုမိုသေချာစေရန် September 23 ရက်တွင် Bangkok Hospital ရှိ OG နှင့် ထပ်မံသွားရောက် ပြသရာတွင် စိုးရိမ်စရာ မလိုကြောင်း နောက် လေးလ ကြာမှ နောက်ထပ် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် လိုကြောင်းသာ ပြောပါသည်။ မီးရှို့ ကုသခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိူးအပြစ်များကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိလိုပါသည်။ မြန်မာပြည်မှ OG အများစုသည် ယခုအခြေအနေ (CIN 1) သည် မီးရှို့ကုသခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်း နိုင်သည် ဟု ပြောဆိုကြပါသည်။ Bangkok Hospital ရှိ OG အား သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ပြောကြည့်ရာ တစ်လင် တစ်မယား နေပါက ထိုးရန်မလိုဟုသာ တွင်တွင်ပြောပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်နှင့် ကွာခြားသောအချက်ကို တွေ့ ရှိရပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် မည်သူ့ကိုမဆို တိုက်တွန်းပါသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်း၏ အကျိူးအပြစ်များကို ရှင်းလင်းစွာ သိလိုပါသည်။ ရောဂါကူးစက်နိုင်သော အကြောင်းအရင်းများ အားလုံးကိုလည်း သိလိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သစ္စာရှိသော အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်ကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် CIN 1, HPV Infection ဖြစ်ရပါသလဲ။ တစ်ခုပြောစရာရှိသည်မှာ ကျွန်တော်၏ အမျိုးသမီးသည် ၃ ကြိမ် သားလျှောခဲ့သဖြင့် အပြင်ဆေးခန်းတွင် ၂ ကြိမ် နှင့် ဗဟိုအမျိုးသမီး ဆေးရုံကြီးတွင် ၁ ကြိမ် D&C လုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
Cervical interstitial neoplasia (CIN) ရောဂါကို Cervical dysplasia လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Potentially premalignant transformation ကင်ဆာ မတိုင်မီအဆင့်ကို ပြောင်းသွားနိုင်ချေ ရှိတယ်။ ဆေးမကုဘဲလဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ ရာခိုင်နှုန်း နဲနဲလေးဟာ Cervical cancer သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Cervical squamous cell carcinoma (SCC) လို့ ခေါ်မယ်။ ဒါကလဲ ကိုယ်ခံအားနဲ့ မပျောက်၊ ဆေးလဲ မကုမှသာ ဖြစ်တယ်။ အမေရိကားမှာ အမျိုးသမီး ၂ သိန်းခွဲကနေ ၁ သန်းမှာ ၁ ယောက် CIN ဖြစ်နေတာ နှစ်တိုင်းတွေ့ရတယ်။ အသက် ၂၅ ကနေ ၃၅ ကြားမှာ အဖြစ်များတယ်။
CIN ဘာလို့ဖြစ်သလဲဆိုရင် Human papillomavirus (HPV) (ပပယ်လိုမား-ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုးဟာ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ပြီး Chronic infection of the cervix သားအိမ်ဝမှာ နာတာရှည် ရောင်တာကနေ ဖြစ်တယ်။ HPV types အမျိုးအစား ရာကျော်ထဲက တဒါဇင်ကနေ၊ အဲဒီထဲက HPV 16, 18, 31, or 45 ကနေ အဖြစ်များတယ်။ ကျန်တဲ့ အမျိုးအစားတွေက Warts ကြွက်နို့ ဖြစ်စေတယ်။
ဖြစ်ကာစမှာ ဘာမှ မခံစားရဘူး။ Pap smear စမ်းသပ်နည်းနဲ့ သိလာရတယ်။ Papanicolaou test, Pap test, Cervical smear, Smear test လို့ အမျိုးမျိုး ခေါ်တယ်။ Vagina မွေးလမ်းကြောင်း ထဲကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Speculum ကရိယာထည့်မယ်။ Endocervical brush ကို အဝထဲထည့်ပြီးလှည့်၊ သားအိမ်ဝ အပြင်ပေါက်အနားက (ဆဲလ်) တွေကို Aylesbury spatula ဆိုတာလေးနဲ့ယူ၊ မှန်ပြားလေးပေါ် တင်ပြီး၊ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ဆေးမယ်။
- Poor personal hygiene တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနည်းတာ၊
- Poor diet အစာအာဟာရမပြည့်စုံတာ၊
- Multiple sexual partners ယောက်ျားဖေါ် များများထားတာ၊
- Lack of condom use ဆက်ဆံရာမှာ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးတာ၊
- Cigarette smoking စီးကရက် သောက်တာတွေကြောင့် ကင်ဆာအဆင့်ကို ပိုရောက်စေနိုင်တယ်။
မိန်းကလေးတိုင်း ၉-၂၆ နှစ် သမီး၊ တနည်းအားဖြင့် လိင်မှုဆိုတာ မဖြစ်သေးချိန်ကတည်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ သားအိမ်ကင်ဆာကို ၇ဝ% ကာကွယ်နိုင်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံတာ စောလေလေ ဖြစ်နိုင်လေဆိုတာ သတိထားပါ။ Safe sex စိတ်ချရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုသာ ပြုပါ။ Condom (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။
မေးတဲ့သူ ပြောသလို သားအိမ်ခြစ်တာကနေ မဖြစ်ဘူး-ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဆေးစာထဲမှာ မတွေ့သေးပါ။ ဆေးကုနည်းတွေက စိတ်ချရပါတယ်။ မကုတာနဲ့ ကုသတာ အကျိုး-အပြစ်တွေ ချင့်ချိန်ရင် လုပ်ကိုလုပ်ရမဲ့ နည်းတွေလို့ လက်ခံသင့်ပါတယ်။
11-9-2011 CT Abdomen & Pelvis = Enlarged cervix suggestive of carcinoma. Cervicitis is less likely.
13-9-2011 Pathology report = Atypical cells present, suggestive of CIN I.
18-9-2011 Pathology Laboratory = Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy
19-9-2011 Histopathology/Cytopathology Report = Severe chronic cervisitis with squamous metapalsia. CIN I and HPV infection.
အဖြေတွေ မတူတာတွေ့ရတယ်။ CT မှာ ကင်ဆာထင်တယ်လို့ ပါတယ်။ CT ထက် သေခြာတာက Pathology နဲ့ Cytology report ဖြစ်တယ်။ ၁၈-၉-၁၁ မှာ ကင်ဆာမဟုတ်လို့ ရေးတယ်။ ၁၉-၉-၁၁ မှာ CIN I လို့ တွေ့ရတယ်။ ဒီနှစ်ခုက အတူတူပါဘဲ။
ဆေးစစ်တာတွေ တဦးနဲ့တဦး၊ တနေရာနဲ့ တနေရာ မတူတတ်ပါ။ (ဆောရီး) ဗျာ။ ဆေးကုသင့်တယ် ဆိုတာတော့ ထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်က OG တော့ မဟုတ်ပါ။
ကာကွယ်ဆေးအကြောင်း သိချင်ရင် -
၁။ (HPV) သားအိမ်အဝ ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး၊
၂။ Pregnancy and HPV Vaccination သားအိမ်-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့
၃။ Genital Warts လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ တွေကိုလဲ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Thanks. Nge Naing
dra gon said...
ပထမ တစ်ခါ ခွဲပြီး ပါပြီ ဒါ ပေ မ ယ့် အိမ်သာ တက်ပြိးတိုင်း ပြန် ပြန် သွင်း နေ ရတယ်..ပျောက် အောင်
ဘာဆေးတွေ စားရမ လဲခင်ဗျ